प्याजको मुल्य बढेपछि बाटैमा लु टिन थाल्यो प्याज, ओसार पसार गर्न समस्या – " सुलभ खबर "
प्याजको मुल्य बढेपछि बाटैमा लु टिन थाल्यो प्याज, ओसार पसार गर्न समस्या
काठमाडौँ । प्याजको मुल्यमा एकाएक अस्वभाविक रुपमा मुल्यवृद्धि भएपछि ओसारपसार गर्दा प्याज लु टिएको छ । नेपाल भारत लगायत आसपासका मुलुकमा अहिले प्याजको मुल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको छ । मुल्य बढेसंगै प्याज ओसार पसारमा पनि चु नौती थपिएको हो । भारतमा ब्यापारीक प्रयोजनका लागि गाडीमा लोड गरेर ओसार पसार गर्ने क्रममा प्याज बाटोमै लु टिएको छ । प्याज बोकेको एउटा ट्रकबाट लु टेराहरुले बाटोबाटै सबै प्याज गा यब पारेका छन् । ब्यवसायीहरु यो घट नापछि आ तंकित भएका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार महाराष्ट्रको नासिकबाट ४० टन प्याज बोकेर उत्तर प्रदेशको गोरखपुरतर्फ जाँदै गरेको ट्रक बाटोमै लु टिएको हो । लु टेरा समूहले ट्रक निय न्त्रणमा लिएर सबै प्याज लगेका छन् । प्रहरीलाई घ टनावारे जानकारी पाएपछि घट नास्थल पुग्दा रित्तो ट्रक फेला परेको जनाएको छ । आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ ।
भारतको दैनिक अखबार हिन्दूस्तान टाइम्सका अनुसार थोक व्यापारी प्रेम चन्दको प्याज बोकेर उक्त ट्रक नासिकबाट हिँडेको थियो । समयमा उक्त ट्रक नपुगेपछि खोजतलास सुरु गर्दा लु टिएको थाहा भएको हो । प्रहरी सहित खोज्न निस्किएको ब्यापारीको टोलीले मध्यप्रदेशको शिवपुरी जिल्लामा बिहीबार रित्तो ट्रक फेला पारेका थिए ।
प्याजको मूल्य बढेका कारण लु टेराहरुले ट्रकबाट प्याज लु टेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । ट्रकका चालक र सहचालकको अवस्था र उक्त घट नामा उनीहरुको भूमिकाबारे खुलाइएको छैन । ट्रक फेला परेको क्षेत्रमा प्याजको बजारमूल्य प्रतिकिलो एक सय भारु पुगेको छ । नेपालमा अहिले प्याजको मुल्य त्यो भन्दा महंगो छ ।
२५ असोज, काठमाडौं । कुखुराको मासु पछिल्लो तीन वर्ष यताकै सस्तो भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन्
हेर्दा हेर्दै सुनको भाउ अब पुरानो मुल्यतर्फ फर्किदै, आपूर्ति बढ्ने, मूल्य अझै घट्ने
काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य घट्ने क्रम सुरु भएको छ । शुक्रबारको तुलानामा हिजो
आज सोच्नै नसकिने गरि सुनको मुल्य घट्दा,बजारमा सुन किन्नेको घुइँचो।
आज सोच्नै नसकिने गरि सुनको मुल्य घट्दा, बजारमा सुन किन्नेको घुइँचो ! काठमाडौं । नेपाली
पानीको मूल्यमा मनपरी, मूल्य बढाउने अनुमति छैन : विभाग
काठमाडौँ, २४ असोज । खानेपानी उद्योग तथा व्यापारीले पछिल्लो समय जार र बोतलको पानीको मूल्य
काठमाडौँ / नेपाली बजारमा आज पहँेलो धातु सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । आइतबार
बढ्याे सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ काराेबार ?
हिंजो सुनको भाउ तोलामा ९४ हजार १ सयमा कारोबार भएको थियाे भने आज तोलामा ८